IZITHOMBE: Kutholakale izinguzunga ezimbili zamadayimane | News24
IZITHOMBE: Kutholakale izinguzunga ezimbili zamadayimane
London – Inkampani yezimayini iGem Diamonds ithole izinguzunga ezimbili zamadayimane ezingaphezu kuka-100 carats emayini eseLesotho, nokwenza le mayini edonsa kanzima ibe seduze nokuqeda isomiso sokuthola amatshe amakhulu.
IGem Diamonds igubhe leli dayimane elingu-104.73 carat lohlobo lwe-D colour Type IIa kanye nelingu-151.52 carat lohlobo lwe-Type I yellow, emayini yayo eseLetseng, le nkampani isho kanjalo esitatimendeni ngoMsombuluko.
Idayimane lohlobo lwe-Type IIa yilona elibiza kunawo wonke njengoba linama-atoms e-nitrogen amancane kakhulu noma angabi bikho nhlobo.
OLUNYE UDABA: Ibhange ladayisa indlu esikhokhelwe yaqedwa ngo-R10
Kuze kube yimanje, iGem Diamonds ibisabike ngokutholakala kwetshe elikhulu elilodwa kulo nyaka – nelalingu-114 carat ngo-Ephreli.
ILetseng idume kakhulu ngobukhulu kanye nezinga eliphezulu lamatshe atholakala khona nalapho amanani awo evamise ukugijima ko-$2 000 i-carat ngayinye, nokuyinani elikhulu kakhulu kule mboni.
Kodwa-ke izinto bezilokhu zingahambi kahle kule nkampani kamuva njengoba ibilokhu ihluleka ukuthola amatshe amakhulu njengoba igcine ithole amatshe amahlanu nje kuphela amakhulu ngaphezu kuka-100 carats ngonyaka odlule, nokuyisibalo esingaphansi kwengxenye yamatshe eyawavundulula ngonyaka ka-2015.
Zibonele izithombe zala madayimane lapha ngezansi:
IDAYIMANDE 1: 104.73 carat D colour Type IIa diamond (Umthombo: Gem Diamonds)
IDAYIMANE 2: 151.52 carat Type I yellow diamond (Umthombo: Gem Diamonds)